ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
အှနျလိုငျး Forex broker
မကျြမှောကျ 190 ကြျောနိုငျငံမြား
အရောင်းအဝယ်သမားများ ၁၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ကျော်
ပါတနာပေါင်း ၃၇၀ ၀၀၀ ကျော်
နိုင်ငံပေါင်းဆယ်နိုင်ငံကျော်မှ ဆုတံဆိပ်ပေါင်း +37
သုည spread အကောင့်
အှနျလိုငျး FBS MT4 WebTrader
Windows အတွက် MT4 ဒေါင်းရန်
Apple Store ကနေ iOS ကို MT4
Google Play ကနေ Android ဖုနျး MT4
Mac OSအတွက် MT4ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူလိုက်ပါ
အှနျလိုငျး FBS MT5 WebTrader
Windows အတွက် MT5 ဒေါင်းရန်
Mac OSအတွက် MT5ကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူလိုက်ပါ
Margin နှင့် Leverage
သင့်လစဉ် ဝင်ငွေထဲ $၃၀၀၀ ထိပေါင်းထည့်ပါ
အဆင့် ၃ ဆင့် ပါတနာပရိုဂရမ်
အခြားပါတနာများကို FBS ဆီသို့ဆွဲဆောင်ပြီးသူတို့ ဝင်ငွေရဲ့ % ကိုရယူပါ။
FBSမှ ကားဆုကို ရယူလိုက်ပါ
၁၂၃ ဒေါ်လာ Bonus
FBS: ကမ္ဘာထိပ်တန်း ငွေကြေးအကျိုးဆောင်ဘရုတ်ကာ၏ ၉နှစ်ပြည့်
FBS သည်စိတ်ကူးသင်၏အိပ်မက်များ အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။
FBSမှ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ Liveလွှင့်သင်ကြားပေးမှု အစီအစဉ်များ
နေ့စဉ် ဈေးကွက် သုံးသပ်ချက်များ
စီးပွားရေး အချက်အလက် ထုတ်ပြန်ချက်
ဥရောပဗဟိုဘဏ်၏ မူဝါဒများသည် ယူရိုငွေကြေးအတွက် အဓိက အရေးပါဆုံးမူဝါဒများဖြစ်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ်မူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေဖြင့် ငွေကြေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက် ၁၄:၄၅ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
ယူရိုဇုန်စီးပွားရေးသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိနေသည့်အတွက် နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဥရောပဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုအား တစ်ဝက်အထိလျှော့ချခဲ့သည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းအလွန်နည်းနေသည့်အတွက် ယခင်အစီအစဉ်ကို ကိုးလအထိ အချိန်ထပ်မံတိုးခဲ့သည်.
ထို့ပြင် ဥရောပဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ ဒီဇင်ဘာလသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ရာ ထိုပွဲကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်. Mario Draghi ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တိုင်းယူရိုငွေကြေးသည် များစွာလှုပ်ခတ်လေ့ရှိပါသည်. အကယ်၍ဥရောပဗဟိုဘဏ် ECBအကြီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ အနေနှင့် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးအပေါ် အကောင်းပြောသွားခဲ့ပါက ယူရိုတန်ဖိုးတက်နိုင်ပါသည်. မကောင်းပြောသွားခဲ့ပါက ယူရိုတန်ဖိုးကျနိုင်ပါသည်.
15.01.2019 10:21 ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒေတာကိုကြည့်ပြီး ဗြိတိန်ပေါင်ရောင်းဝယ်ပါ
ဗြိတိန်စားသုံးသူ ဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်း (CPI)အဆင့်အား ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပါမည်။
usd forex ကုနျသှယျ gbp
14.01.2019 10:28 USD ရောင်းဝယ်ရန် အခွင့်အရေးယူပါ
အမေရိကန် PPI၏ အဆင့်အား ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပါမည်။
usd forex ကုနျသှယျ forex exchange
10.01.2019 14:30 စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းများတွင် ဗြိတိန်ပေါင်ရောင်းဝယ်ပါ
ဗြိတိန် GDP အဆင့်များနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်များအား ဇန်နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအချိန်တွင်ထုတ်ပြန်ပါမည်။
gbp စီးပွားရေး စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန်
16.10.2017 12:16 UK CPI (အင်္ဂလန် စားသုံးသူများ၏ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေမှု အခြေအနေ)
UK CPI ဒေတာကို အောက်တိုဘာ ၁၇ရက် ၁၁:၃၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်.
25.10.2017 15:46 ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲ
အောက်တိုဘာ ၁၆တွင် ကျင်းပမည့် ဥရောပဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲကို ထရိတ်ဒါအများက စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၁၄:၄၅ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ဥရောပဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ မာရီယို ဒရာဂီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပါ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်.
06.11.2017 09:58 သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ် ဆွေးနွေးပွဲ
သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ် (RBA)၏ မူဝါဒများသည် AUDအတွက် အဓိက အရေးပါဆုံးမူဝါဒများဖြစ်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ်မူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေဖြင့် ငွေကြေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို နိုဝင်ဘာ ၇ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် မိုက်ခရို အကောင့် ပုံမှန်(စံ) အကောင့် ECN သုည spread ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် MT5 ပုံမှန်(စံ) အကောင့် MT5 အပိုဆု ၅၀$ အကျိုးတူလုပ်ငန်း
အကောင့်ငွေကြေး USD EUR
ကျွန်ုပ်သည် FBS သဘောတူညီချက် စည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံပါသည် အခြေအနေများနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒ ကို လက်ခံပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တွင် ရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်းနှင့်အတူ ရှိလာနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
၂။ ပါတနာ သဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအား ဖတ်ရှု၊ လက်ခံပြီးပါပြီ
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကို followလုပ်ပြီးပါပြီ။
FBSသည် ဤဝဘ်ဆိုဒ်လည်ပတ်ရန် သင့်အချက်အလက် မှတ်တမ်းအား ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ "လက်ခံသည်" ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒ ကို သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
bitcoin သဘော အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း litecoin dash ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးပညာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ငွေကြေးလုပ်ငန်းဗဟိုဈေးကွက် ethereum ထုတ်လုပ်သည် လူသုံးကုန် စီးပွားရေး ရောင်းဝယ်သူ၏ ဝေါဟာရ brl နယူးဇီလန် ဗဟိုဘဏ် try (တူရကီ လိုင်ရာ) thb (ထိုင်းဘတ်) chf aud bitcoin forex exchange လူတွေ့မေးမြန်း ဘလော့ချိန်း လူနေမှုဘဝ forex ပညာပေးသင်ကြားရေး gold ဥရောပ ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး သြစတြေးလျ အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ mxn (မက္ကဆီကို ယွမ်) ရွေးကောက်ပွဲများ ဂျပန်ဘဏ် သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ် စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် ရေနံ eur ကုနျသှယျရေး bitcoin nzd jpy အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ လက်လီရောင်းချသူများ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု zar (တောင်အာဖရိက ရန်) အခြေခံသုံးသပ်ချက်(fa) စက်မှုလုပ်ငန်း တရုတ် idr (အင်ဒိုနီးရှား ရူပီး) အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား forex factory အပျော် ပညာရေး ဖြစ်ထွန်းမှု dow jones usd cad အာရှ နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက် trend အရောင်းအဝယ် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် သတင်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း တောင် အာဖရိက ဘရာဇီး အင်္ဂလန်ဘဏ် စီးပွားရေး ဒေတာ try လှုံ့ဆော်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး forex ကုနျသှယျ gbp forex signals အတိုးနှုန်း အမြတ် ဂျာမနီ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ဈေးနှုန်းများ ထိုင်ဝမ် လူသစ်များ အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်မှုများ အောင်မြင်မှု ငွေကြေးများ cnh တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် ကနေဒါ ဘဏ် show all
တရားဝင်: ဝဘ်ဆိုဒ်သည် Mitsui Markets Ltd.မှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါသည်။
လိပ်စာ: ၁၃၃ Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efale, Vanuatu
မကြာမီ မန်နေဂျာမှ လူကြီးမင်း၏ ဖုန်းကိုပြန်ခေါ်ရန်။
ယခုဖုန်းနံပါတ်အတွက် နောက်ထပ် ပြန်လည်ခေါ်ဆိုပါ တောင်းခံချက်ကို ရရှိနိုင်မည့်အချိန် 00:30:00
အတွင်းပိုင်းတစ်ခုခုအမှားအယွင်းဖြစ်နေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ။
စတင်ရောင်းဝယ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အရေးအကြီးဆုံးအရာ
သင့်အီးမေးလ်ကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါ. Forex လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို သင့်ထံအခမဲ့ ပေးပို့ပေးသွားပါမည်
သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာချန်ထားခဲ့ခြင်းအားဖြင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒအား လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအီးမေးလ်အား ကလစ်နှိပ်ကာ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုပြီး စတင်လေ့လာနေသူများအတွက် Forex လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို အခမဲ့ရယူလိုက်ပါ.
သင်ဟာ ဘရောက်ဇာ ဗားရှင်းအဟောင်းကိုသုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်.
အောင်မြင်မှုပိုရဖို့ နှင့် အရောင်းအ၀ယ် အတွေ့ အကြုံတွေရပြီး လုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက် အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကို သုံးပါ.